အဆိုပါသဲသောင်ပြင်ပေါ်ဆမ် | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! အဆိုပါသဲသောင်ပြင်ပေါ်ဆမ် | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
အခမဲ့ဂတ်စ် slot များအတွက်မြျှောအပေါ် slot စက်ပရိတ်သတ်တွေကဒီအံ့သြဖွယ် slot ကဂိမ်းကြောင်း NYX နဲ့အားရစရာအဘို့၌ရှိကြ၏ (ဆတ်) အတူထွက်ရောက်လာပြီ. ဤသည် slot ကဂိမ်း (ကမ်းခြေပေါ်ဆမ်) နာမည်ကျော် slot ကဂိမ်းလျှပ်စစ်ဆမ်တစ်နောက်ဆက်တွဲနှင့်အတူတူပင်ဗဟိုဇာတ်ကောင် features, ဆမ်ဟာ trolls. ဒီ slot ကဂိမ်းထဲမှာ, ဆမ်, သူ့ဇနီးစန်ဒရာနဲ့သူ့ရဲ့သမီးမဂ္ဂီကာရစ်ဘီယံထဲမှာဆမ်ရဲ့ဦးလေး Ted သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း. ဤသည်အခမဲ့ဂတ်စ်ပေါက်ဂိမ်းချက်ချင်းကမ်းခြေရန်သင့်အားတယ်လီပို့ဖို့နောက်ခံအတွင်းလှိုင်းတံပိုး၏ပြော့အသံနှင့်အတူတစ်အမြင်အာရုံအားရစရာဖြစ်ပါတယ်. အလုံအလောက်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံ? ဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုတွေ့ရှိရန်အပေါ်ကိုဖတ်ကြပါစို့.
NYX (ဆတ်) စတူဒီယိုစတော့ဟုမ်းအခြေစိုက်. ဤသည်ဆွီဒင်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် 2012 နှင့်တဖြည်းဖြည်း၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းအကြားနေရာမှအောင်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်အခမဲ့ဂတ်စ် slot ဂိမ်း (ကမ်းခြေပေါ်ဆမ်) ရှိပါတယ်5reels,3အတန်း, နှင့် 243 paylines. သငျသညျအကြွေစေ့အကွာအဝေးအထိ 20p လှည့်ခြင်းများ၏နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးကနေအစပြုနှင့်ဝင် 100 လှည့်ဖျားရန်. ဒီဂိမ်းတစ်ခုအကြီးအကျယ်ထီပေါက်ရှိပါတယ် 2, 27,520 ဒင်္ဂါးပြား. သင်မြင်သော reels အပေါ်အမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတများရှိပါသည်. ဆမ်, အဆိုပါအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများပင်လယ်ဝါကြယ်များပါဝင်သော်လည်းသူ၏မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များဂိမ်း high-တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများဖြစ်ကြသည်နှင့်အတူ, ရွှေခေါင်းလောင်း, လိမ္မော်ရောင်ကဏန်းများနှင့်အပြာရောင် Seahorses.
သင် reels ပေါ်မှာရှိသမျှလေးပါးကိုမိသားစုဝင်များ get လျှင်ကစားသို့ကြွလာရသောတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် feature ကို '' သဲသောင်ပြင်အမှတ်တရများ Respin '' တစ်ချိန်တည်းမှာရှိပါတယ်. ဒီအလှည့်ဖျားဆုကြေးငွေရှုပ်ထွေးသောရိုင်းသို့အပေါငျးတို့သမိသားစုဝင်များလှည့်နှင့်သင်တစ်ဦးအခမဲ့လှည့်ဖျားရ.
ဒီအခမဲ့ဂတ်စ် slot ဂိမ်းထဲမှာနောက်ထပ်ပျော်စရာ feature ကို '' လျှပ်စစ်ရယူထားသော '' ဖြစ်ပါသည်. တိုင်းမိသားစုဝင်ကဤရယူထားသောတစ်ဦးရှိပြီးသူတို့ဖြစ်ကြသည်:
ဆမ် - 3x ဆမ်သင်္ကေတကိုရယူလိုက်ပါနှင့်ရှုပ်ထွေးသောရိုင်းအနိုင်ရ
မဂ္ဂီ - 3x မဂ္ဂီသင်္ကေတဟာ reel ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ
စန်ဒရာ- 3x ကစန်ဒရာသင်္ကေတများကိုသင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးပိုရန်သင့်လောင်းကစားရှယ်ယာတိုးပွါးကြောင်းမြှောက်ကိန်းအနိုင်ရပါစေပါလိမ့်မယ်
ဦးလေး Ted- 2x သို့မဟုတ် 3x ၏မြှောက်ကိန်းကိုသင်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများအပေါ်ဦးလေး Ted သင်္ကေတအရဆိုပါက.
တစ် rating5ဒီတောက်ပအခမဲ့ဂတ်စ် slot ဂိမ်းမှ. ဒီဂိမ်းနီးပါးတစ်ခု RTP ရှိပါတယ် 97% နှင့်ရောနှောအရင်ကဆိုရင်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကအများကြီးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် run နိုင်ပါတယ်, မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ပင်တက်ဘလက်. ဒီတော့ယခုကထုတ်စစ်ဆေးသွားပါ!